Milatariga Soomaaliya oo Howlgalo ka fuliyay gobolka Baay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Milatariga Soomaaliya oo Howlgalo ka fuliyay gobolka Baay
Milatariga Soomaaliya oo Howlgalo ka fuliyay gobolka Baay
Howlgal military oo wadajir ay u fuliyeen Taliska Ciidanka Mareekanka ee Afrika iyo Milatariga Soomaaliya ayaa waxaa Ka dhacay degaanka Buulafuulaay degmadda Diinsoor ee gobolka Baay.
Howlgalkaan oo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab ayaa saraakiisha hoggaamineysay waxaay sheegeen inay ku burburiyeen Xarun ay Al-Shabaab ku sugnaayeen, isla markaana ay kasoo abaabuli jireen weerarada.
War kasoo baxay Wasaaradda warfaafinta dowlada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaas lagu dilay mid kamid ah Saraakiisha Sar sare ee Al-Shabaab, aysana wax khasaare ah kasoo gaarin dadka Shacabka ah.
Horay Ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamo Mareykan ah ayaa waxaay howlgallo kala duwan uga sameeyeen degaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka, iyagoo sheega inay dileen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab iyo Xubno dagaalameyaashooda ka mid ah.
Mareykanka ayaa inta badan duqeymo ka fuliya degaano ku yaal Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, kuwaasoo ay la beegsanayaan Xarumaha iyo deegaanada kale ee la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin dagaalameyaasha AL-shabaab.
Previous articleGabdhaha oo lagu boorriyay inay waxbarashada ku dadalaan
Next articleLaamaha Amniga Galmudug oo shir deg deg ah kayeeshay dad lagu dilay Galgaduud